DHAGAYSO: Wasiirka amniga gudaha oo su’aalo uga jawaabaya dhagaystayaasha “sawirro” – Radio Muqdisho
DHAGAYSO: Wasiirka amniga gudaha oo su’aalo uga jawaabaya dhagaystayaasha “sawirro”
Wasiirka amniga Gudaha Mudane Cabdirisaaq Cumar Maxamed ayaa sheegay in hay’adaha ammaanku ay ka hortageen dhowr isku day oo ay kooxaha nabadda diiddan ku soonayeen inay ku dhibaateeyaan shacabka Soomaaliyeed.
Barnaamijka Sahanka Raadiyaha ee ka baxa Radio Muqdisho oo saakay ka qeyb galay ayuu ku faahfaahiyay qorshaha xukuumadda ee ku aaddan ammaanka dalka iyo kaalinta looga baahan yahay inay ka qaataan shacabka Soomaaliyeed.
Mudane Cabdirisaaq ayaa sheegay in kooxaha xagjira ay doonayaan in waddanku uusan nabad noqon, dadka Soomaaliyeedna ay si joogto ah u xasuuqaan, halka dowladdu ay ku howlan tahay sidii dalka looga sifeyn lahaa dowladda.
Qaar ka mid ah dhagaysataasha ayuu uga jawaabay su’aalo la xiriira kaalinta hay’adaha ammaanku ay ku leeyihiin badbaadinta muwaadiniinta iyo sida looga hortagi karo weerarrada ay Al-Shabaab soo qaadayaan. Wuxuu ka codsaday shacabka Soomaaliyeed inay la shaqeeyaan ciidanka oo ay siiyaan warbixin haddii ay arkaan wax ammaankooda lid ku ah.
Dhaqan gelinta istiraatiijiyadda dowladda ee ku aaddan ammaanka iyo la dagaallanka Al-Shabaab ayuu sidoo kale ka hadlay wasiirka, isagoo intaa ku daray in ciidanku si joogto ah uga howl gali doono xaafadaha magaalada Muqdisho.
Qeybta hoose ka dhagayso barnaamijka oo dhammaystiran;
Sawir:-qaade Maxamed Cabdullaahi Maxamed (feereysane)
Wariye Farxaan Suleymaan “Aaad ayay u fiican tahay xaaladdaydu, waana socdaa”
Maareeye: “Shiinaha waxey diyaar u yihiin inay mashaariic horumarineed Soomaaliya ka fuliyaan.”